राष्ट्रपतिले आफ्नो शासनको संकेत गरेकै हुन् त ? | नेपालको सम्झना
Browse » Home » समय सान्दर्भिक विचार/विश्‍लेषणहरु » राष्ट्रपतिले आफ्नो शासनको संकेत गरेकै हुन् त ?
यदि कहि कतै निस्कनु पर्यो भने सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर अहिले यादवले आफूलाई ठूलो शक्ति केन्द्रको रुपमा स्थापित गराउन लागेका छन् । दैनिक जसो राजनीतिक भेटघाटलाई तिब्र बनाएका यादवले अहिले दलका नेता देखि कार्यकर्ता सम्मलाई भेट्दै सुझाव तथा आदेश दिन थालेका छन् ।तीन महिना पहिले भारत भ्रमण गरेर फर्किएपछि राष्ट्रपति यादव राजनीतिमा बढी सकि्रय भएको देखिन्छ । भारत भ्रमणमा रहँदा उनले त्यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता देखि उच्च पदस्थ अधिकारीलाई भेट गरेका थिए ।राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण र भारतीय चाहना विपरितको वर्तमान सरकार । यीनै कारणले पनि विभिन्न शंका उपशंका उब्जिएका हुन् । राष्ट्रपतिको यस्ता गतिविधिको सत्तारुढ दलहरुले विरोध गरिरहेका छन् । तर यादवले अहिले खुलेर सत्तारुढ दलको विरोध गर्न थालेका छन् । यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो । यो प्रश्न चौतर्फि गर्न थालिएको छ ।राष्ट्रपति यादवले अहिले सार्वजनिक कार्यक्रममै दुई चार दलको सकि्रएताले शान्ति प्रकि्रया पूर्णतामा पुग्न नसक्ने बताउन थालेका छन् । उनको यो भनाईलाई शुष्म ढंगले हेर्नेहो भने निकै अर्थपूर्ण छ । दिन आयो भने समय संग चलेर मात्र राष्टपतिले आफ्नो सक्रियता बढाउनु उचित देखिन्छ. अन्यथा दल हरु मिल्नुको विकल्प छैन। यो अबस्थामा राष्ट्रपति शासन हुने भन्ने कुरा कल्पना भन्दा पनि बाहिरको कुरा हो । तसर्थ दल हरु यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै अगाडी बढ्नु उचित देखिन्छ । ज्ञानेन्द्रको महत्वकांक्षाले जसरी सिङ्गो राजसंस्थानै इतिहास बन्यो त्यसैगरी दलहरुको महत्वकांक्षाले मुलुकलाई कुन अवस्था पुर् याउने त्यो अहिले नै भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । यद्यपी यो विषयमा दलहरु बेलैमाथि जिम्मेवार बन्न सकेनन् भने मूलुकमा ठूलो राजनीतिक दुर्गती नहोला भन्न सकिदैन । यसपछि राष्ट्रपति शासन या राजा फर्कने बाहेक अरु कुनै विकल्प हुने छैन। त्यसैले पनि राजा फर्कनु भन्दा आफूलेनै केहि गर्न सक्यो भने देश दुर्घटना बाट बच्छ्की भनेर राष्ट्रपतिले यो संकेत गरेका हुन् कि त ???????
0 comments to “राष्ट्रपतिले आफ्नो शासनको संकेत गरेकै हुन् त ?”